HirShabelle oo ka hortimid hadalkii Golaha Midowga Musharraxiinta mucaaradka | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA HirShabelle oo ka hortimid hadalkii Golaha Midowga Musharraxiinta mucaaradka
HirShabelle oo ka hortimid hadalkii Golaha Midowga Musharraxiinta mucaaradka
Maamulka HirShabelle ayaa si cad uga horyimid qoraalkii kasoo baxay xubnaha Midowga Musharraxiinta mucaaradka ee lagu sheegay in aysan suuragal aheyn in doorasho lagu qabto magaalada Beledweyne ee maamulkaasi.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka HirShabelle, Siraaji Sheekh Isaaq iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Beledweyne ayaa ka hadlay warka kasoo yeeray musharraxiinta, iyaga oo si weyn uga soo horjeestay.
Siraaji oo shirka jaraa’id ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in dano siyaasadeed laga leeyahay warqadda kasoo baxday Midowga Musharraxiinta, wuxuuna tilmaamay in doorashada xildhibaanada labada aAal lagu qaban karo gudaha magaalada Beledweyne.
Sidoo kale waxa uu xusay in hadalka siyaasiyiinta mucaaradka ah uu qas iyo fowdo horleh ka abuurayo deegaanada HirShabelle, sida uu hadalka u dhigay.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka HirShabelle oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale xusay inay HirShabelle raalli-gelin uga fadhido Golaha Musharraxiinta.
Dhankiisa guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo shirka jaraa’id ka hadlay ayaa shaaciyey inay Midowga Musharraxiinta u gefeen reer Hiiraan, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Beledweyne.
Jayte ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in musharraxiinta hadalkan faafiyey ay doonayaan in doorashada laga weeciyo magaaladaasi, sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn waxa uu ka digay sii socosha arrintan, isaga oo tilmaamay inay baal-marsan tahay heshiiskii doorashada, isla-markaana lagu dulminayo reer Beledweyne.
Si kastaba hadalkan ayaa kusoo aadaya, xilli Midowga Musharraxiinta mucaraadka qoraalka ay soo saareen ku sheegeen in dhibaatooyin amni iyo kuwa siyaasadeed oo aan saamixi karin in doorasho lagu qabto Beledweyne ay ka jiraangudaha magaaladaasi.
Previous articleAfter Divorce Any New Union Should Be Handled Very Carefully
Next articleMaamulka gobolka Banaadir oo ka laabtay fasax maanta la siiyey shaqaalaha + sababta
Yaa maal galiya Dacaayadaha lagu magac dilayo Siyaasiyiinta Mucaaradka ?!! (Xog)
War cusub oo ka soo kordhay dad 48 saac lagu weysanaa daadadkii ka dhuftay Qardho
Akhriiso “ Muxuu ka yirii Abdikarim Hussein Guled Kulankii Baarlamaanka oo buuq dartiis loo soo xiray
C/raxmaan C/shakuur oo Su’aalo ka keenay hadalo ku jiray wareysigii MD Farmaajo
Jubaland oo ka hadashay abaaraha ka taagan Gobolka Gedo & Hal Arin oo Musiibo ah Ka jirta
Akhriso: Mowqifka A/Madoobe & DENI ee shirka Dh/mareeb oo la Ogaaday
Kulan dhex-maray wasaarada amniga DF iyo mas’uuliyiinta gobolka Gedo oo afar qodob laga soo saaray
DHAGEYSO: Dawlada Oo Sheegtay In Meydadka Shabaab Ka Carareen Dagaalkii Daynuunaay Ay Hayaan
Qaramada Midoobey oo Saraakiil Horay ooga Tirsanaa Al-shabaab Tababar Usooxirtay
DAAWO:Majaajilayste caanka ah dunida oo loo haysto in uu yiri “Afrika ayaa ku gulaystay Koobka aduunka “.